मुक्तिनाथ विकास बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला, कहिलेसम्म दिन पाईन्छ आवेदन ? – Insurance Khabar
मुक्तिनाथ विकास बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला, कहिलेसम्म दिन पाईन्छ आवेदन ?
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०७:२६
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आज साउन ७ गते बिहीबारबाट ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो ।
जसमध्ये बैंकले ७५ करोड बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट र ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । यसैगरी, सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने कुल ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ ।
बैंकले ७ वर्ष अवधिको ८.७५ प्रतिशत व्याजदर भएको ‘मुक्तिनाथ डिबेञ्चर २०८४/८५’ नाममा ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो । ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
बैंककलाई केयर रेटिङ नेपालले मध्यम कर्जा जोखिम जनाउने ‘केयर एनपी त्रिपल बी आईएस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । सो रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाहरुलाई समयमा नै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित मानिन्छ ।
लगानीकर्ताले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ५ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा साउन ११ गते र ढिलोमा साउन २१ गतेसम्मसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले सानिमा क्यापिटल लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सि आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।